Sina OEM PP Cotton landihazo lohan-doha fantsom-pandrefesana Core mpanamboatra sy mpamatsy | Xinpaez
Sivana fandroana Tech vaovao - vokatra Generation faha-2, Fitration mahery vaika kokoa, Fitaovana avo lenta
Filtration shower - Ho an'ny depiote, harafesina, vovoka, Nemotodes, sns.
Ela velona - 3-6 volana
OEM ODM - Fahaiza-mamokatra avo lenta, vokatra namboarina.
Toetoetra: Saringan'ny fandroana
Kaonty ambany indrindra: 1000
Na hanaiky fanaingoana: OEM, ODM azo ekena
Size: 70/106/124/118 MM
PP landihazo Shower sivana Core
Kalitaon'ny fitaovana: fibre polyester (fitaovana PP)
Fotoana fanoloana: 3 ka hatramin'ny 6 volana, miankina amin'ny kalitaon'ny rano, 10000L matetika.
Function: Sivanina ny loto amin'ny kôlidia, fotaka, harafesina, atody bibikely, fandotoana organika, sns
Taham-panivanana: 5 Micron
Ny singa sivana landihazo PP dia vita amin'ny resina polypropylene ho akora fototra hanamboarana kofehy, izay fehezin'ny fibra mihitsy. Ny firafitry ny singa sivana dia rafitra misy kofehy sosona ivelany matevina, kofehin'ny loko anatiny manify, sosona ivelany malalaka, ary sosona anatiny tery. Ny sivana avy any ivelany ka hatrany anatiny, ny akaiky kokoa ny sosona anatiny an'ny singa sivana, ny kely kokoa ny haben'ny pore, ny haavon'ny filtration no avo kokoa.
Ity filtration gradient gradient tsy manam-paharoa ity dia namorona effet residue telo-dimensional filter, izay mety ho rafitra maro sosona sy lalina, miaraka amin'ny fahafaha-mitazona loto lehibe; Ny singa PP voadoka tsofina dia mahery, rehefa ny sivana miditra sy ny fivoahan'ny tsindry dia 0.4Mpa, lehibe ny tahan'ny filtration ary kely ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry, tsy simba ny fototr'ilay sivana; Izy io dia mampifangaro ny filtration ambonin'ny, lalina, henjana ary tsara; Izy io dia manana ny mampiavaka ny fikorianan-drano goavambe, ny fanoherana ny harafesina, ny tsindry ambony. Izy io dia ampiasaina hanakanana ireo sombintsombiny lehibe toy ny harafesina, fasika ary atody bibikely ao anaty rano.
Miresaka momba ny fanoloana, Satria ny singa sivana landihazo PP dia an'ny singa sivana amin'ny dingana voalohany rehefa mandro, mihoatra ny 80% ny loto no hosivanina amin'ity sehatra ity, ary arakaraky ny handotoana ny loto, no mora kokoa ny singa mpanivana sakanana. Noho izany, ny ain'ny singa sivana landihazo PP dia fohy dia fohy. Ny singa sivana dia mety mila soloina mandritra ny roa volana mahery any amin'ireo faritra tsy misy kalitaon'ny rano, ary ny faritra lava indrindra misy kalitaon'ny rano tsara kokoa dia tsy hihoatra ny enim-bolana. Ka raha mividy lohan'ny fandroana misy singa mpanivana landihazo PP ianao, mba hisorohana ny fandotoana faharoa, dia asaina soloinao ny fototr'ilay sivana isaky ny 3-6 volana eo ho eo.
Ahoana ny fomba hitsarana ny kalitaon'ny singa sivana landihazo PP
1. Azafady mba jereo ny lanjany. Afaka mandrefy ny lanjantsika amin'ny tanantsika isika. Arakaraky ny lanjan'ny lanjany no mampitombo ny hakitroky ny sivana amin'ny singa sivana. Ny kalitao koa tsara kokoa.
2. Azafady mba zahao ny fitaovana. Rehefa misafidy sivana dia tsy maintsy antenaina tsara ny votoatin'ny singa sivana. Ny lokon'ny filma sivana mahazatra dia mitovy ary fisaka ny atiny. Ny haavon'ny sivana ambany dia tsy mitovy loko na mahantra firavaka.
3. Fanamafisana. Amin'ny ankapobeny, ny haavon'ny fibre amin'ny sivana no avo kokoa. Arakaraka ny maha tsara kokoa ny fahombiazan'ny famatrarana, ny hatsaran'ny kalitaon'ny sivana landihazo PP. Afaka mitsara amin'ny fahatsapana amin'ny tanana isika, arakaraka ny maha-mafy ny fahatsapana amin'ny tanana, no tsara kokoa ny fahombiazan'ny famatrarana.
Amin'ny ankapobeny dia manome habe efatra izahay, serivisy OEM sy ODM misy. Tsy maninona izay habe ilainao,
azontsika atao ny manamboatra azy io. Amin'izao fotoana izao dia manana andalana famokarana 10 miasa ao amin'ny PP Core izahay miaraka amina famoahana 2 tapitrisa isam-bolana.
Previous: Cartridge sivana fandroana vitamina C Aroma Vitamin C
Manaraka: Fanasa-tànana voasivana amin'ny teknolojia avo lenta
lo loha mandro
lohany mandro tsara indrindra
lohany fandroana tanana lafo vidy
loha fandroana rendrarendra
Loha fandroana kely misy sivana maromaro